"Waxaad La Yaabaysaa Sida Uu Waddankiisa U Caawiyo Sadio Mane, Jurgen Klopp Ayaana Heer Kale Gaadhsiiyey" | Laacib.net
“Waxaad La Yaabaysaa Sida Uu Waddankiisa U Caawiyo Sadio Mane, Jurgen Klopp Ayaana Heer Kale Gaadhsiiyey”
March 26, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on “Waxaad La Yaabaysaa Sida Uu Waddankiisa U Caawiyo Sadio Mane, Jurgen Klopp Ayaana Heer Kale Gaadhsiiyey”
Sadio Mane ayaa lagu amaanay sida uu waddankiisa u caawiyo iyo heerka uu xirfaddiisa kubadda cagta ka gaadhay muddadii uu joogay Liverpool, taas oo uu kula guuleystay Champions League, sidoo kalena horyaalka Premier Legue ee xili ciyaareedkana y kaliya lix dhibcood uga hadhsan yihiin.
Kaddib markii xirfaddiisu kusoo baxday kooxda Metz ee waddanka Faransiiska, Mane waxa uu u wareegay waddanka Jarmalka oo uu kaga biiray RB Leipzing oo 63 ciyaarood oo uu u saftay uu u dhaliyey 31 gool.
Horyaalka Premier League ayaa usoo wareegay, waxaana 11.8 milyan Gini ku iibsatay Southampton, laba sannadood markii uu u ciyaarayna, waxa uu muujiyey in aanay jirin meel soo celinaysa oo ay xirfaddiisu ka sarrayso naadiyadan, waxaana £34 milyan oo Gini kaga iibsatay Liverpool.
Thomas Dahne waxay Sadio Mane u wada ciyaareen Salzburg xili ciyaareedkii 2012-13, waxaanu ka warramay siddeed sannadood ka hor sifooyinkii uu ku arkay laacibka reer Senegal, waxaanu yidhi: “Wuxuu ahaa mid aad u miyir-qaba oo deggan. Marka kaliya ee la ogaaday waxay ahayd markii uu garoonka soo galay, waxaad si degdeg ah u arki karaysay inuu sare u socdo. Haddana waxa uu ka mid yahay xiddigaha ku guuleystay Premier League iyo Champions League.
“Markii uu yimid 2012 (Salzburg), waxaad mar horeba qiyaasi karaysay inuu xaqiiqdii wanaagsanaanayo, laakiin miyaa la suuraynayay inuu 10ka laacib ee ugu wanaagsan noqonayo siddeed sannadood kaddib?
“Taasi runtii waxay ahayd saadaal adag marka da’diisa la eego. Laakiin marka ay kubaddu lugtiisa ku jirto, waxa uu bilaabayay xarfad, goysmo, waxaanu u dheeraynayay sida hillaaca. Maantana waxa uu noqday ciyaartoygaas oo dabcan heer ka duwan jooga tayo ahaan. Klopp ayaaNA gebi ahaantiiba heer kale geeyey.”
“Caadiyan, wuxuu noogu muuqday mid aad noogu dhow oo dabacsan, waxaas oo dhanna waxaad ka arkaysaa shaqooyinka caawimada ah ee uu ka qabto waddankiisa hooyo.” Ayuu raaciyey Thomas Dahne.